Wiil Soomaaliyeed oo Hargeysa ka tagay oo waxbarasho ka billaabaya Jaamacadda Harvard – Radio Muqdisho
Abdisamad- (C) Sahan Journal
Xigasho: Sahan Journal
Abdisamad Muhiyadin Adan, waa arday Soomaali ah oo jira labaan sano wuxuu ka tagay magaalada Hargeysa. Cabdisamad waxaa aqbashay jaamacadda magaca weyn ee Harvard eek u taalla dalka MAreykanka. Wuxuu helay waxbarasho minxo ah oo dhamaanaysa sanadka 2019-ka.
Abdisamad wuxuu ka qalin jabiyay dugsiga cilmiga bulshada iyo technology-yada ee Abaarso, oo ku yalla magaalada Hargeysa.
Dugsiga Abaarso, waxaa la aasaasay sanadkii 2009-ka, waa School leh hooy oo ay ardaydu seexdaan, waxaa wax ka barta 185 arday oo heerkoodu u dhaxeeyo fasalka 7aad ee degsiga dhexe iyo fasalka 12aad ee dugsiga sare u dambeeya.
“Ma ihi wiilka uu wanaagsan Soomaaliland, Laakin waxaan helay fursad aan ku dhigto dugsiga Abaarso” ayuu u sheegay Cabdisamad Telefishanka CNN.
Wuxu billaabi doonaa bisha September waxbarashada darajada koowaad ee Jaamacadda, markii uu helay aqbalaadda jaamacadda kaddib, wuxuu u sheegay ayeeyadiis inuu aadayo jaamacadda Harvard oo aysan waligeed maqlin.
“Harvard wax micno ah uguma fadhin ayada, laakin markii ay xaqiiqsatay inaan helay waxi aan rabay, waa ay faraxday” ayuu yiri Cabdisamad.
Abaarso, waa dugsi waxbarasho oo uu aasaasay nin u dhashay Mareykanka oo lagu magacaabo Jonathan Starr, wuxuu ku kharash gareeyay shan boqol oo kun oo dollar oo uu isagu lahaa sida ay sheegeyso Sahan Journal oo qortay sheekadan.
Dugsigu, wuxuu qorsheynayaa inuu ballaariyo shaqada oo uu qabto arday cusub, sidoo kale uu badiyo fasallada, shaqaalaha iyo qalabka waxbarashada. Waxaa ka caawin doona arrintaas hay’adaha deeqaha bixiyo oo ay ku jirto USAID.
Sida lagu daabacay bogga iskoolka, Abaarso waxay $2.5 million ku kharash gareysay waxbarasho lacag la’aan ah oo ay siisay 24 arday, 19 ka mid ah ardaydaas ayaa waxbarasho u aadaya dalka Mareykanka.
Qaar ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn mareykanka oo ay ku jiraan Massachusetts Institute of Technology, Georgetown University, Carnegie Mellon University iyo Amherst College ayaa aqbalay inay wax baraan ardayda ka qalin jabisay dugsiga Abaarso.
Mr. Starr oo ah aasaasaha dugsigaan ayaa sheegay in jaamacado badan oo ku yaalla Mareykanka iyo dalalka ree galbeedka ay u malaynayeen in ardayda wax ku soo baratay Soomaaliya aysan awoodin inay wax ka bartaan jaamacadahooda.
Ardayda ka baxday Abaarso ayaa muddo sanad ah dibadda wax ka barta si ay ula qabsadaan waxbarashada jaamacadeed.
Sidaas oo kale, Abdisamad wuxuu wax ka bartaa Iskool ku yaalla New York muddo sanad ah, si uu isugu diyaariyo jaamacadda . wuxuu sheegay inuu xiiseynayay inuu barto dhaqaalaha iyo cilmiga siyaasadda. “Waxaan isku dayayayaa inaan sare u qaado heerkeyga maalinba maalinta ka dambeysa, si aan u caawiyo waddankeyga” ayuu yiri Abdisamad.
“Dadku wxay ii sheegayaan in jaamacadda Harvard ay runtii tahay mid tartan ka jiro, qof kasta wuxuu isku dayayaa inuu kaa badiyo, waan ka helay, waa wax weyn, taasi waa waxa aan doonayo” ayuu ku soo gabagabeeyay warkiisa.